Storelọ ahịa | ya na Visa + Work + CV Ọrụ maka ndị si mba ọzọ
Na-arụ ọrụ ma biri ná mba ọzọ
Họta site n’obodo ndị kasị eto eto n’ụwa.
You Chọrọ ịmalite Ndụ Ka Mma?
'Szọ kachasị mma nke ụwa maka ahụmịhe njem
Lọ ahịa - Citylọ Ọrụ Dubai City
Chekwaa Visa + Work + CV maka Expats. Biko họrọ ebe dị mma maka gị !. Dị ka anyị na-enwe ọtụtụ puku ndị ala ọzọ n'ozuzu ha na-ekwu okwu, site na India yana Pakistan na Saudi Arabia. Anyị na-enye ọrụ dị ịtụnanya ugbu a maka ha niile. Yabụ, biko lee ihe Dubai City Company nwere ike imere gị. Dịka onye njem, ọ ga-adị gị mkpa ịnweta ozi zuru ezu iji nweta ọrụ. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ Dubai City na-enye ndu maka expats. N'okpuru ebe a bụ Visa anyị na ọrụ yana ọrụ mkpuchi ọrụ.
Anyị nwere olile anya na ị ga-ahọrọ obodo gị kacha mma. N'elu ndepụta anyị, ị ga-enwe ebe ịchọrọ ọkwa maka ibi na ịrụ ọrụ dịka onye mba ọzọ. Yabụ, iji ma atụ, ị nwere ike ịkwaga na Jordan yana Saudi Arabia, United States America na United Kingdom.
Etu esi eji ahia anyi?
Youkwesịrị iche maka mba zuru oke ị ga-ebi. Mgbe ahụ ị ga-ahọrọ Visa gị ma ị nwere ike ịzụta ọrụ site na otu anyị. N'akụkụ dị mma, ndị otu anyị ga-elekọta usoro ịkwaga gị. Yabụ, ị ga-ahọrọ ma zụta visa n'aka ụlọ ọrụ anyị. Ndị otu ụlọ ọrụ Dubai City na ndị ọkachamara na-eme ihe ndị ọzọ dị mkpa iji nyere gị aka ịbụ onye njem na United Arab Emirates.
Ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịchọrọ (97)
Ihe ncheta Dubai (76)
Nchọta Job (1)
uwe muslim (158)
Ikike akpa na njem igbe (264)
Visa gaa Middle East (15)
uwe ọrụ (38)